ဟက်ကာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးအထူးကျွမ်းကျင်သူဖြစ်လာသည် Linux မှ
Luigys toro | | GNU / Linux များ, အကြံပြုပါသည်
SinceLinux စာဖတ်သူများအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေဖြစ်သော 'hacker' ဆိုသည့်အဓိပ္ပါယ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားသင့်သည် ChrisADR ဆောင်းပါး၌သူတို့ကိုလုံလောက်သောအသေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့ပါဘူး hacker ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲဤဆောင်းပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်ရုတ်ရုတ်သဲသဲဖြစ်ခြင်းသည်သတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့ထံလာရောက်သည့်လာရောက်လည်ပတ်သူအမြောက်အများကိုထပ်တိုးစေသည် Hacking နှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆာဗာများကိုကာကွယ်ရန်ခက်ခဲသောအတွေ့အကြုံနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည် "တာဝန်ရှိသည်" ဒီစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့aboutရိယာအကြောင်းအထူးပြုလေ့လာရန်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားရန်။
ကျနော်တို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်ရပေမည် မည်သူကိုမဆို hack လုပ်ခြင်းနှင့် pentesting ဆိုင်ရာအသိပညာကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မဟုတ်ပါ။, ဇောက်ထိုးမိုးမျှော်, ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှသူတို့ကိုအန္တရာယ်ရှိသောတိုက်ခိုက်မှုများမှမိမိတို့ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ရန်ခွင့်ပြုသည့်နည်းစနစ်များနှင့်အယူအဆများကိုတဖြည်းဖြည်းသင်ယူနိုင်စေလိုသည်သို့မဟုတ်သူတို့စွမ်းရည်ရှိသည်ပျက်ကွက် သူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းအခွင့်အလမ်းတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကူညီသောလုံခြုံရေးမူဝါဒများဖန်တီးပါ.
ကျွန်ုပ်သည်ထိုဒေသရှိအထူးကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါက ကွန်ပျူတာလုံခြုံရေးကိုအလွန်အလေးအနက်ထားသောနေရာများငါလည်းလုပ်ရတယ် လုံခြုံရေး protocols များကိုစီမံခန့်ခွဲ ကျွန်တော့်ဖောက်သည်တွေအတွက်တော့၊ ဒါပေမယ့်အားလုံးအထက်မှာကျွန်တော်အာရုံစိုက်ခဲ့တယ် ကျွန်ုပ်၏လျှောက်လွှာများကိုပိုမိုလုံခြုံစေရန်နည်းစနစ်များကိုတီထွင်ပြီးအသုံးပြုပါ။ ဤအရာအားလုံးကိုကျွန်တော်ဆိုလိုသည်မှာလူများထင်မြင်ယူဆချက်နှင့်ဆန့်ကျင်။ ၊ မည်မျှပင်ရိုးရှင်းပါသည်၊ မည်မျှပင်ရှုပ်ထွေးစေကာမူဟက်ကာနည်းစနစ်များသည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပြီးပိုမိုလုံခြုံသောကွန်ပျူတာများနှင့်ပရိုဂရမ်များရရှိရန်ခွင့်ပြုခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ privacy ကိုချိုးဖောက်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များ၏သမာဓိကိုအာမခံသည်။
အထက်ပါအချက်များအားလုံးပြီးသည်နှင့်မည်သူ့ကိုမျှလျှို့ဝှက်မထားသင့်ပါ Hacking နှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကောင်းစွာလေ့လာပါငါလုပ်နေတာ။ အဲဒါဟာပျော်စရာကောင်းပြီးထူးဆန်းတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့်ဆုံးမမှုအများဆုံးနည်းလမ်းမဟုတ်တဲ့ဖျော်ဖြေရေးနည်းစနစ်တွေကိုအဆုံးသတ်မပေးဖို့အလေးအနက်ထားမှုနှင့်လုံလောက်သောလမ်းညွှန်မှုကိုရည်ညွှန်းသည့်လမ်းကြောင်းတစ်ခုထက်သာသည်။ ငါအတော်လေးအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားဖတ်နှင့်အတူစတင်ပေမယ့်ငါနှင့်အတူသင့်လျော်သောစဉ်းစားသောသင်တန်းကိုယူနိုင်ခဲ့သည် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဟက်ကာသင်တန်းပြီးဆုံးသည်, ဒီသင်တန်းငါ့ကိုလမ်းညွှန်အပြင်, ဤဒေသများရှိနေ့တိုင်းကိုင်တွယ်သောသဘောတရားများ, စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်စံချိန်စံညွှန်းများအဘို့အခိုင်မာသောအသိပညာရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ ကျွန်ုပ်ကိုယ်ပိုင်အားနည်းချက်များနှင့်ခြိမ်းခြောက်မှုများကိုရှာဖွေသောကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ခန်းကိုဖန်တီးပါ ငါသင်တန်းမှာဆုံးမသွန်သင်သောနည်းစနစ်များနှင့်အတူ။
အဆိုပါကူပွန်ဇန်နဝါရီလ 6, 2018 ကနေတက်ကြွပါလိမ့်မည်
အဆိုပါကူပွန်သင်တန်းဖန်တီးသူအားဖြင့်မူလစျေးနှုန်းတိုးအပေါ်အခြေခံပြီးလျှော့စျေး margin ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ စျေးနှုန်းမည်သို့ပင်ရှိပါစေ၊ သင်တန်းသည်အသစ်ပြောင်းခြင်းအသစ်များဖြင့်ကြွယ်ဝပြည့်စုံခဲ့သည်
ပြီးခဲ့သည့်သင်တန်းများကဲ့သို့ပင် DesdeLinux သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်လာမည့် ၇ ရက်အတွင်းဤသင်တန်းကိုအထူးစျေးနှုန်းဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ရန်အတွက်ကူပွန်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ link ကို နိုင်လိမ့်မည် လျှော့စျေးဖြင့်သင်တန်းကိုအမြဲတမ်းပျော်မွေ့ပါ 90% 75% ။ ထိုနည်းတူစွာပင်ကျွန်ုပ်သည်အသေးစိတ်လေ့လာမှုပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိမည့်အရာများနှင့်အခြားအကြောင်းအရာများတွင်ပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာများ၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်သင်ယူမှုနည်းလမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအမြင်များကိုစိတ်ကူးထားပါလိမ့်မည်။
1 Hacking နှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးအတွက်နိဒါန်း။
3 Hacking နှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောသင်တန်း
ဒီသင်တန်းက ဗီဒီယို ၁၂၃ ခုပါ ၀ င်သည်, အရာ add ပြန်ဖွင့် 16 နာရီကျော်ကျယ်ပြန့်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူအားလုံး စပိန်ဘာသာဖြင့် နှင့်တစ် ဦး မှညွှန်ကြားခဲ့သည် အားလုံးပညာရေးအဆင့်ဆင့်၏အများပြည်သူ။ ပြီးစီးကြောင်းလက်မှတ်ကိုကမ်းလှမ်းသောသင်ခန်းစာကို ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သော Udemy Platform မှသင်မည်သည့် browser မှမဆိုရယူနိုင်သည်။ Android နှင့် Ios အက်ပ်များ.
ဤသင်ခန်းစာသည်သီအိုရီ ၁၀၀% - လက်တွေ့ကျသည်။ ရည်ညွှန်းလမ်းညွှန်များစွာနှင့်အတူ၊ သင်တစ်လျှောက်လုံးတွင်သင်သည်နည်းစနစ်များကိုသင်ယူပြီးသင်လေ့လာခဲ့ရာများကိုလက်တွေ့တွင်အသုံးချနိုင်သည်။ အပိုင်းတစ်ခုစီတွင်သရုပ်ပြခြင်းနှင့်ဖြည့်စွက်သည့်အကြောင်းအရာများရှိသည်။
Eduardo Arriols Nuñez သူ၏သင်တန်းတွင်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ hacking နှင့်တိကျစွာသင်ပေးသည် Hacking နှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးအတွက်နိဒါန်းပုံဥပမာများနှင့်ထိန်းချုပ်ထားသောနှင့်ထိန်းချုပ်မှုမရှိသောပတ် ၀ န်းကျင်ရှိအစစ်အမှန်သရုပ်ပြမှုများနှင့်အတူသင်တန်းတစ်လျှောက်လုံးတွင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအတော်လေးအသုံးဝင်သောအကြံပြုချက်များပေးသည်။ ထို့အပြင်ယေဘုယျအားဖြင့်သင်တန်းတွင်ဆရာမှအတည်ပြုသောသတင်းအချက်အလက်များကိုမျှဝေသောအလွန်တက်ကြွသောအသိုင်းအဝိုင်းရှိသည်။
ဒီသင်တန်းကိုအောက်ပါအတိုင်း oriented ဖြစ်ကြောင်းခြောက်ယူနစ်သို့ခွဲခြားထားတယ်
ယူနစ် 1ဖြေ - ဒီသင်တန်းဟာနယ်ပယ်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပေးဖို့၊ အခြေခံသဘောတရားအချို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးဖို့၊ အဓိကအားဖြင့်၊ သင်သင်တန်းကိုအပြည့်အဝရရန်အတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှအကြံဥာဏ်များပေးဖို့ရှင်းလင်းစွာရည်ရွယ်ထားတဲ့ယူနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
2 ယူနစ်: ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၁၀ မိနစ်ရှိသောဗီဒီယို ၆ ခုမှတစ်ဆင့် Ethical Hacking နှင့် Cybersecurity အကြောင်းအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောနိဒါန်းကိုဖော်ပြထားသည်။ ထိုနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားအမျိုးမျိုးသောလေ့လာမှုများပြုလုပ်နိုင်ရန်လိုအပ်သောလေ့ကျင့်မှုများနှင့်အပြင်၊ လုံခြုံရေးနှင့်စာရင်းစစ်၏အခြေခံအယူအဆများကိုသင်ပေးလိမ့်မည်။ တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ကိရိယာများလုံခြုံရေးနှင့်လုံခြုံရေးနည်းစနစ်များ။
အပိုင်း ၃: ယူနစ်သုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ်ခန်းများကိုသင်ယူရန်ခွင့်ပြုသည်။ ထိုနေရာတွင်တိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်အားနည်းသောစက်များကိုဗိုင်းရတ်ဖြင့်အာရုံစိုက်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကျိုးစီးပွား၏ဗဟိုဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင် Eduardo သည်ကျွန်ုပ်တို့အား Ethical Hacking အတွက်အဓိကဖြန့်ဖြူးမှုများအပေါ်အကြီးအကျယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ၎င်းနှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်တို့အားသတိပေးသည်။ ၄ င်းတို့တွင်အားနည်းချက်များ (စနစ်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအလျှော့ပေးရန်လေ့လာရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည်) ရှိသည်။
4 ယူနစ်: Ethical Hacking မှအကောင်းဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးရယူရန် Eduardo မှအကြံပြုသော distro ကိုမည်သို့မျှော်လင့်နိုင်သနည်း Kali Linux ဖြစ်သည်။ အခန်း ၄ တွင် operating system ကိုကိုင်တွယ်ပုံကိုနက်နက်နဲနဲသင်ပေးသည်။ ဤ distro တွင်ရရှိနိုင်သောအဓိကကိရိယာများကိုကျွန်ုပ်တို့ခွဲခြားထားသည်။ console ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ ကောင်းမွန်သောလေ့ကျင့်မှုပေးခဲ့ပြီးအလုပ်များကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ရန် bash တွင် scripts များကိုတီထွင်ရန်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။
5 ယူနစ်: ယူနစ်ငါးသည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်အမည်ဝှက်ခြင်းကို ဦး တည်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားရှင်းလင်းမှုနှင့်တိကျမှန်ကန်စွာမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနှင့်အမည်ဝှက်ကွန်ယက်များအသုံးပြုခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြေခံအယူအဆများကိုကျွန်ုပ်တို့အားရှင်းလင်းစွာတိကျစွာပေးထားသည်။ ထိုနည်းတူစွာပင် TOR ကဲ့သို့သောလျှို့ဝှက်အမည်တပ်ဆင်ရန်နှင့်အသုံးပြုရန်သင်ကြားသည် နောက်ဆုံးအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင်အမည်ဝှက်ခြင်းပလက်ဖောင်းကိုမည်သို့ဖန်တီးရမည်ကိုသင်ကြားပေးသည်။
ယူနစ် 6နောက်ဆုံးယူနစ်များသည်ခက်ခဲပြီးလက်တွေ့ကျသောကမ္ဘာကြီးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြင်ဆင်ပေးသည်။ နေ့စဉ်ထိခိုက်နစ်နာမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရပြီးလုံလောက်သောကာကွယ်ရေးယန္တရားများမရှိဘဲကျွန်ုပ်တို့အားထိခိုက်ခံရမည့်အန္တရာယ်ရှိသည့်လူမှုအင်ဂျင်နီယာနှင့်သတင်းအချက်အလက်မျှဝေရန်အတွက်လုံလောက်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုဆန့်ကျင်သောတန်ပြန်ရေးအစီအမံများကိုလေ့လာလိမ့်မည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Eduardo ကိုအသုံးပြုရန်သင်ကြားပေးမည့်နည်းစနစ်များနှင့်ကိရိယာများဖြင့်အားနည်းချက်များစွာကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီးအသုံးချနိုင်သည်။ ဒီယူနစ်သည်အားလုံးတွင်အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးအတန်း ၆၅ ခုပါ ၀ င်သည်။ ထိုနေရာတွင်သင်သည်အသေးစိတ်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ Hacking နှင့်သက်ဆိုင်သောရှုပ်ထွေးဆုံးနေရာများကိုလေ့လာမည်ဖြစ်သည်။
သင်ခန်းစာတစ်ခုချင်းစီကိုဖြည့်စွက်သောဗွီဒီယိုများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုယူနစ်များကတင်ပြပြီး၊ ကျွမ်းကျင်မှုများကိုအမှန်တကယ်ပြသသောစမ်းသပ်မှုများနှင့်အတူဤကြီးမားသော Hacking လောကနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးကိုစတင်ရန်မှာသေချာသည်။
အကယ်၍ သင်သည် hacking နှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပါကဤသင်တန်းတွင်သင်၏ဗဟုသုတကိုပြန်လည်အတည်ပြုနိုင်သည့်နည်းပညာဆိုင်ရာအခြေခံများကိုသင်ရရှိလိမ့်မည်။ သင်မသိသောနည်းစနစ်များကိုလည်းသင်အတည်ပြုနိုင်လိမ့်မည်။ ဤကြီးစွာသောအတွေ့အကြုံအတွက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသူကျောင်းသား 700 ။
အဓိကအချက်မှာသင်တန်းသည် 'အသက်ရှင်' ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာဗွီဒီယိုအသစ်များကိုလတိုင်း upload လုပ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ကျောင်းသားသစ်များအတွက်သင်တန်း၏စျေးနှုန်းတက်လိမ့်မည်။ ယခင်သင်တန်းပြီးဆုံးသောကျောင်းသားများအားလုံးအတွက်၊ ၎င်းတို့သည်ထုတ်လုပ်လိုက်သောအကြောင်းအရာအသစ်အားလုံးကိုအကန့်အသတ်မရှိရယူနိုင်လိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်သင်တန်း၏နိဒါန်းကို Udemy ရှိနိဒါန်းဗီဒီယိုတွင်တွေ့နိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အတွက်အသုံးဝင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သည်။ cupón ယေဘုယျအားဖြင့်သင်တန်း၏စျေးနှုန်း $ 120 ဖြစ်ပြီးလျှော့စျေးနှင့်အတူဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်သူတို့ကသူတို့ကဝယ်ချင်လျှင်အမှု၌သူတို့စုဆောင်းနိုင်အောင် 10,99 $ 29,99 $ ။
ယခုကြှနျုပျတို့ဟုခေါ်တွင်တဲ့ဆက်စပ်သင်တန်းလုပ်နေတာ Hacking နှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးအတွက်နိဒါန်း၎င်းသည်ဗီဒီယို ၅၆ ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ စုစုပေါင်း ၈ နာရီကြာပြန်လည်ဖွင့်နိုင်သည်။ စာမျက်နှာ ၂၅၀ ကျော်ပါသည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစပိန်ဘာသာဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ ပညာရေးအဆင့်အတန်းအားလုံး၏ပရိသတ်ကိုရည်ရွယ်သည်။ ၎င်းတွင်အဆင့် ၇ ဆင့်ဖြင့်ဖြန့်ဝေထားသောစာမေးပွဲ ၇ ခုရှိပြီးပြီးမြောက်ကြောင်းလက်မှတ်ရရှိသည်။ ငါတို့လည်းကူပွန်ရခဲ့ကြသော်လည်းအရေးတကြီးနှင့်သင်၏လေ့ကျင့်ရေးတွင်ကူညီရန်အခြားဆောင်းပါးတစ်ခုတွင်မကြာမီမျှဝေမည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့သည်။ ဒီမှာ ထားခဲ့ပါ လင့်ခ် ဒီသင်တန်းအတွက်ကူပွန်၏ $ 10,99 ကုန်ကျရန်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အကြံပြုပါသည် » Hacking နှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးအထူးကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ဖြစ်လာသည်
အထူးလျှော့စျေးကူပွန်အလုပ်လုပ်ပုံမရပါ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား ၇၅% လျှော့စျေးပေးထားပြီးကူပွန်မပါဘဲ ၀ င်ရောက်လာသောကျန်လူများကဲ့သို့ ၂၉.၉၉ ယူရိုသာရှိသည်။
မင်္ဂလာပါစိတ်မကောင်းပါ၊ ကျွန်ုပ် Udemy အသင်းနှင့်အမှန်တကယ်ဆက်သွယ်ပြီးကူပွန်သည်မနက်ဖြန်မှအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်။ ဒီတော့ဒီနေ့မရရှိနိုင်ကြောင်းစိတ်မကောင်းပါဘူး။ ယခုကျွန်ုပ်သည်ဆောင်းပါး၌၎င်း၊ နက်ဖြန်နေ့၌မှတ်စုကိုချန်ထားပါမည်။ ကူပွန်အလုပ်လုပ်သောအခါထပ်မံ update လုပ် ..
Adrian abadin ဟုသူကပြောသည်
adrian abadin မှစာပြန်ပါ
မူလဆောင်းပါးကိုလိုအပ်သောပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများနှင့်အကြံပြုချက်များကိုအဆင့်မြှင့်ပြီးပါပြီ။ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကန့်သတ်ချက်မရှိခြင်းကြောင့်ကူပွန်သည် ၂၅% လျှော့စျေးကိုသာပေးနိုင်ပြီးဒေါ်လာ ၂၉.၉၀ ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့မှတ်ချက်များအတွက်ပိုမိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာခဲ့ကြနှင့်အလားတူသင်တန်းတစ်ခုကူပွန်ကဆက်ပြောသည်။
Frank Davila ဟုသူကပြောသည်
အမိုင်ဂို၊ တောင်းပန်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်ဗင်နီဇွဲလားကပါ။ သင်တန်းကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီငွေပမာဏကိုကျွန်တော်မပေးရပါ။
Hector Padró ဟုသူကပြောသည်
သငျသညျ shit, Maduro မဲပေးစောင့်ရှောက်လော့။
ချစ်ခင်ရပါသောမင်္ဂလာပါ ငါ link ကိုနှင့်ခွဲတမ်းအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါနှင့်ဖော်ပြထားသောလျှော့စျေးပေါ်လာပါဘူး, ငါသည်ဤသင်တန်းကိုကျင့်ချင်တယ်။
Anglo SATO Arevalo ဟုသူကပြောသည်
ANGEL SATO Arévaloအားပြန်ပြောပါ
ဆောင်းပါးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!!!! အထူးလျှော့စျေးကိုဘယ်အချိန်မှာရရှိနိုင်မလဲ မင်္ဂလာပါ
Linuxita ပါ ဟုသူကပြောသည်
ဆောင်းပါး၌လျှော့စျေးသည် ၉၀% ဖြစ်သည်၊ သို့သော်အမှန်မှာ ၇၅% ဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြထားသည်
ကျွန်ုပ်သည် Udemy သုံးစွဲသူနှစ်အနည်းငယ်ရှိခဲ့ပြီး၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့် ၅၀% မှ ၉၀% သို့လျှော့စျေးအမျိုးမျိုးပေးလေ့ရှိသည်။ သင်အမှန်တကယ်စျေးနှုန်းသို့မဟုတ် 50% လျှော့စျေးမတတ်နိုင်လျှင် 90% ကမ်းလှမ်းမှုကိုပြန်ထားရန်စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။
ငါပဲ Udemy မှာ java သင်တန်းကို ၀ ယ်လိုက်ပြီ။ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဟက်ကာသင်တန်းကိုလည်း ၀ ယ်ဖို့ငါစဉ်းစားနေတယ်။ ကမ်းလှမ်းမှုတွေကိုမကြာခဏယူပြီးလား၊ သူတို့ပြောတဲ့နေ့မှာဒါမှမဟုတ်သူတို့ရက်အနည်းငယ်ထပ်တိုးလိုက်ရင်အဆုံးသတ်မယ်လား။ ?
ကူပွန်သည်ဒေါ်လာ ၁၀.၉၉ အဘယ်မှာရှိသနည်း။
Jorge Perez ဟုသူကပြောသည်
သင်တန်းကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်၊ သို့သော် code သည်မမှန်ပါ၊ မဟုတ်သည်။
Jorge Perez အားပြန်ပြောပါ
ဒီကူပွန်ဟာလုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကိုမလုပ်ဘူး၊ ငါ Udemy မှာရာထူးတိုးမြှင့်ပေးဖို့တာဝန်ရှိသူကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာစာရေးခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းတာကသူဟာကျူးဘားမှာဆက်သွယ်မှုသိပ်မရှိသလောက်ပဲ။ အဆိုပါကူပွန်မှန်ကန်သောအဖြစ်, ငါလူတိုင်းသိတယ်နှင့်သူတို့အသိပေးစာကိုလက်ခံရရှိရန်ငါစိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်တစ်ခုချင်းစီကိုတုံ့ပြန်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တ ဦး တည်းတွန်းအားပေးသစ်တစ်ခုပေးပို့ပါလိမ့်မယ် ...
Lagarto သတင်းအချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကဆိုပါတယ်ကူပွန်ဖို့မျှော်လင့် !!!!
သို့သော်ကူပွန်သည်လက်ရှိကမ်းလှမ်းချက်နှင့်အတူသက်ဆိုင်သည်သို့မဟုတ်သီးခြားကူပွန်တစ်ခုကသင့်အား ၉၀% လျှော့စျေးဖြင့်ကျန်စေသလား ???
ကူပွန်နှင့်အတူသင်တန်း၏စျေးနှုန်း 10.99 $ ပါလိမ့်မယ်
ကူပွန်မှမည်သည့်အချိန်တွင်ထွက်လာသနည်း ??? နှင့် Grax
ကောင်းသောနေ့လည်ခင်း ၉၀% လျှော့စျေးသည်မပေါ်သေးပါ ငါသင်တန်းကိုယူစိတ်ဝင်စားတယ်။ ငါတို့ဆုပေးနိုင်ရင်မင်းငါ့ကိုအသိပေးနိုင်မလား။ ငါစောင့်ကြည့်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိစ္စတွင်။ udemy စာမျက်နှာတွင် ၉၀% လျှော့စျေးနှင့် ၁၀.၉၉ တန်ဖိုးရှိသည့်သင်တန်းသည်အင်္ဂလိပ်စာဖြင့် ၂၅ နာရီအနက်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်သင်တန်းကိုစိတ်ဝင်စားပါကကူပွန်ချင်သော်လည်း၊ ဤသင်တန်း၏စျေးနှုန်းအမှန်ကိုကျွန်ုပ်မတတ်နိုင်ပါ။ 🙂
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်မှိုင်းပြီးမှတ်ချက်ရေးရန်ဘယ်တော့မှမဖြစ်သော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအခွင့်အရေးကိုဘလော့ဂ်ပေါ်တွင်ချီးကျူးဂုဏ်ပြုပါသည်။
Bielefeld မှနှုတ်ခွန်းဆက်သ !!!
နောက်ဆုံးတွင် desdelinux အသုံးပြုသူများသည်သင်တန်းကိုဒေါ်လာ ၁၀.၉၉ ဖြင့် ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်နောက်ဆုံးပေးထားသောကူပွန်နှင့်ပတ်သက်သောတုန့်ပြန်ချက်ကိုရရှိပြီးဖြစ်သည်။ ကံမကောင်းသောဒီကူပွန်ကိုသင်တန်းတစ်ခုလျှင်ဒေါ်လာ ၃၀ နှင့် သုံး၍ မရပါ။ ပြောရရင် ၇၅% လျှော့စျေးပေါ့၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်တန်းကိုဖန်တီးတဲ့သူကသူနှုန်းကိုတိုးပေးပြီးပလက်ဖောင်းကဒီပမာဏကိုအနည်းဆုံးခွင့်ပြုလို့ပဲ။ Udemy ၀ န်ထမ်းများကအသုံးပြုသူနှင့်သဘောတူညီမှုရရန်ကြိုးစားသည်၊ သို့သော်အားလပ်ရက်များကြောင့်တုန့်ပြန်မှုမရှိဟုထင်ရသည်
ယခုငါတို့ခေါ်သောဆက်စပ်သင်တန်းကိုလုပ်နေတယ် Hacking နှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးအတွက်နိဒါန်း၎င်းသည်ဗီဒီယို ၅၆ ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ စုစုပေါင်း ၈ နာရီကြာပြန်လည်ဖွင့်နိုင်သည်။ စာမျက်နှာ ၂၅၀ ကျော်ပါသည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစပိန်ဘာသာဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ ပညာရေးအဆင့်အတန်းအားလုံး၏ပရိသတ်ကိုရည်ရွယ်သည်။ ၎င်းတွင်အဆင့် ၇ ဆင့်ဖြင့်ဖြန့်ဝေထားသောစာမေးပွဲ ၇ ခုရှိပြီးပြီးမြောက်ကြောင်းလက်မှတ်ရရှိသည်။ ငါတို့လည်းကူပွန်ရခဲ့ကြသော်လည်းအရေးတကြီးနှင့်သင်၏လေ့ကျင့်ရေးတွင်ကူညီရန်အခြားဆောင်းပါးတစ်ခုတွင်မကြာမီမျှဝေမည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့သည်။ ဒီမှာ ထားခဲ့ပါ လင့်ခ် ဒီသင်တန်းအတွက်ကူပွန်၏ $ 10,99 ကုန်ကျရန်။
ထိုနည်းတူစွာပင်ဤသင်တန်းသည်ဇိမ်ခံကားတစ်ခုဖြစ်သည် Paco sepulveda ထိန်းချုပ်ထားသောနှင့်ထိန်းချုပ်မှုမရှိသောပတ် ၀ န်းကျင်ရှိပုံဥပမာများနှင့်စစ်မှန်သောသရုပ်ပြခြင်းများကိုဟက်ကာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းစွာနှင့်တိကျမှန်ကန်စွာသင်ပေးသည်။
zaf မြစ် ဟုသူကပြောသည်
zaf river အားပြန်ကြားပါ
Fsociety - အလွန်ကောင်းတဲ့ hacking tools တစ်ခု